Shirkii waxgaradka & maamulka Mudug ee Garoowe oo qadobo ka soo baxeen+Sawiro – SBC
Shirkii waxgaradka & maamulka Mudug ee Garoowe oo qadobo ka soo baxeen+Sawiro
Posted by editor on Agoosto 18, 2011 Comments
Shirkii uga socday Maamulka iyo Waxgaradka Gobolka Mudug oo ka socday Xarunta madaxtootada ee Garowe oo laga soo saaray Qodobo.
Shirkii uga socday Xarunta Madaxtooyada Puntland ee Magaalada Garowe Maamulka iyo Waxgaradka Odayaasha Gobolka mudug Maalmihii la soo dhafay oo looga hadlayey sidii laysaga wada kaashan lahaa amaanka iyo Hormarka Gobolka ayaa waxaa laga soo Saaray Qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin.
1. Dowladdu waxay garawsatay xaaladaha amni-xumo, maamul iyo duruufaha gaarka ah ee ka jira Gobolka Mudug sida meesha ay ku taalo.
2.Dowaladdu waxay ka shaqaynaysaa midaynta iyo xalinta khilaafaadka shacabka ku dhaqan Gobolka Mudug, si meel looga soo wada jeensado wax ka qabashada ciddii wax u dhimaysa amniga gobolka .
3.Dowladdu waxay ballanqaaday inay sida ugu dhaqso badan uga hawlgelayso wax ka qabadka arrimaha Amniga, Maamulka iyo Horumarinta gobolka Mudug, waxaana laysla qaatay in xoog la saaro arrimaha soo socda:
4. Dadka geysta dembiyada bareerka ah sida, dilka, dhaawac, kufsi, dhac iyo I.W.M. in lagu fulliyo qaanuunka dowladda iyo shareecadda
5. Dembiilahaasi dhibka uu geysto isaga ayey ku gaar ku tahay ehelkiisana waxba loo raaci maayo, sidoo kale qabashadiisa waxa iska kaashanaya Dowladda iyo shacabka siiba eheladiisa.
6 .Qofka ciidanka ah wixii xadgudub ama tacadi ee uu layimaado isaga ayaa ka masuula Dowladda iyo eheladiisana looma raacayo.
5. Askerigu isagoo gudanaya waajibaadkiisa wixii uu geysto ama loo geysto Dowladda ayaa mas’uuliyadda qaadaysa.
7. Wixii dhimasho ama dhaawac ah oo ka soo gaara dembiilayaasha hawlgalada ciidamada Amniga cidna looma raaci karo.
8.. Dadka Dowladdu u qabato arrimo la xiriira amniga inaan cidina ka daba tegi Karin, damiinaan Karin inta laga baarayo,cidii isku daydo inay si qaldan ku soo deyso eedaysanahaas waxaa loo aqoonsanayaa inay gacan siinayso eedaysanha caqabadna ku tahay amniga.
9. Inay Dowladdu xal u hesho dadka amni-xumida looga shakiyo ee laga soo celiyo Gobolada kale ee Gaalkacyo la keeno.
10. In la sameeyo wacyigelinta joogto ah oo ku aadan amniga iyo horumarinta Gobolka
11. Dhinaca in la tayeeyo maamulka waxaa laysla qaatay in dadka xilka qabanaya noqdaan kuwo lagu soo xulo aqoon, kartida iyo hufnaan.
12. dhinaca in la tayeeyo maamulka gobolka waxaa la isla qaatay in Dowladu raadiso mashaariic horumarineed oo ay shaqo ka helaan dhalinyarada la dhaqan celinayo iyadoo xoog la saarayo kordhinta waxsoosarka iyo dibu-dhiska kaabayaasha shaqaalaha.
13. In si wadajir ah loo ilaaliyo deegaanka isla markaana laga hortago gubida dhirta(dhuxusha) dabargoynta ugaarta, iyo deegaameynta dhulka aan sharciyaysnayn.
14. waxaa si wada jir ah shirka looga canbaareeyey cidkasta oo wax udhimaysa Amniga iyo xasiloonida Gobolka sida:- Burcadbadeeda, Argagaxisada iyo Kooxaha ka ganacsada muqaadaraadka.